Manomeza · Global Voices teny Malagasy
Tohano ny fahalalahana maneho hevitra na aiza izany na aiza
Voadika ny 18 Desambra 2020 4:51 GMT
Vakio amin'ny teny Català, srpski, English
Hatramin'ny taona 2005 no efa niasa ny Global Voices tamin'ny fananganana tetezana miampita manerana ireo firenena sy fiteny ary niaro ny fahaleovantenan'ny fampitam-baovao, ny fisokafan'ny aterineto ary ny zon'ny tsirairay amin'ny fanehoan-kevitra malalaka na aiza na aiza misy azy.
Mino izahay fa maika kokoa noho ny hatramin'izay ny iraka nampanaovina anay. Miangavy anao mba hanome anio hanampiana anay hanohy hanao izany asa lehibe izany.
Raisin'ny 501(c)3 tsy mitady tombontsoa, Sakaizan'ny Global Voices ny fanomezana ary tsy andoavan-ketra ho an'ireo Amerikana mpandoa hetra. Manaiky ny ankamaroan'ny kara-pananana [carte de crédit] rehetra ny PayPal (tsy voatery hanana kaonty PayPal).
Fanomezana goavana, Orinasa Mpanohana Ara-bola, Fanontaniana ?
Raha te-hanome fanomezana goavana ianao, na mila fanazavana bebe kokoa momba ny safidy fandoavam-bola hafa, na fanohanana tononina anarana, na karazana fanohanana hafa dia andefaso mailaka ny Tale Mpanatanteraka Ivan Sigal ao amin'ny ivan@globalvoices.org.